को हुन् माया आचार्य ? « Tulsipur Khabar
को हुन् माया आचार्य ?
सरल र साधारण स्वभावकी माया आचार्यको जन्म २०२० साल माघ ६ गते घोराहीको रझेनामा भएको हो । सानैदेखि राजनीतिमा अभिरुचि राख्ने आचार्यका लागि परिवारमा खुलेर राजनीति गर्ने वातावरण भने थिएन । टेस्ट सम्मको अध्ययन गर्नुभएकी आचार्यमा पञ्चायति व्यवस्था प्रतिको वितृष्णाबाट राजनीतिक अभिरुचि वढेर गएको थियो । ०३५ सालमा १६ वर्षको उमेरमा दङाली आन्दोलनका प्रखर व्यक्तित्व श्रीमणी आचार्यसँग वैवाहिक सम्वन्धमा वाँधिएकी थिइन ।
राजनीतिक पृष्ठभुमिको परिवारसँग जोडिएपछि उनमा रहेको राजनीतिक चेतले मौलाउने अवसर पाएको थियो । दङाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका आधारस्तम्भ मानिने नेत्रलाल अभागी, शोभाराम वस्नेत लगायतले उनको विवाहका लागि भुमिका खेलेका थिए । श्रीमणीलाई विवाह पश्चात मात्रै उनले चिनेकी थिइन् । उनको विवाह भएको वेलामा श्रीमणी शिक्षक समेत हुनुहन्थ्यो । घरमा ससुरा काँग्रेस र श्रीमान कम्युनिष्ट दुइ खाले राजनीतिक वातावरण भएपनि उनलाई यसले खासै प्रभाव पारेन । उनले एकैपटक काँग्रेस र कम्युनिष्टका कार्यकर्ताहरुलाई वेग्ला वेग्लै ठाउँमा खाना खुवाउथिन् ।
२०५० सालमा पाटी सदस्यता लिएकी मायाको प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवनको आरम्भ भने २०४६ सालबाट नै भएको हो । उनले अनेमसंघ उरहरी गाउँ कमिटीको सचिव भएर राजनीतिको यात्राको सुरुवात गरेकी थिइन् । २०४७ मा अनेमसंघको क्षेत्रिय सदस्य हुदै २०४८ सालमा जिल्ला कमिटीमा समेत उनले संलग्नता जनाइन् । पाटीको आठौ र नवौ राष्ट्रिय अधिवेशनमा प्रतिनिधको रुपमा समेत उहाँले प्रतिनिधित्व जनाइसकेकी छिन् ।
विजौरी गोलिकाण्डमा गोलि लागेर घाइते भएका श्रीमणी आचार्यको २०६४ पुष ३ गते मृत्यु भएपछि उनलाई शहीद पत्निका रुपमा एमालेले सम्मान दिदै आएको थियो । हाल नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सल्लाहकारका रुपमा समेत क्रियाशिल आचार्यले तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको उप मेयरका रुपमा आफुले नमुना कामहरु गर्र्नेे वताउनु भएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ असार २२ गते बिहिवार